Hong Kong: Antsojay araka ny lalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2011 11:38 GMT
Na eo aza izany, ny antsojay araka ny lalàna dia mety mbola hampangirifiry mafy noho ny fanenjehana ara-politika. Nandritra ireo taona roa lasa, maro ireo vohikala sy sehatra fiadian-kevitra anaty aterineto no nenjehan'ny fikambanana any an-toerana, ny Vondron'ny Mpanao Gazety Tatsinanana, noho ny firesahana momba ny tantara mampiahiahy mikasika ny fandraharahana rongony antsokosoko ataon'ny mpikambana roa isan'ny nanangana azy.
Nandritra ireo taona vitsy lasa, tsy nitsahatra nandefa antontan-taratasim-pitsarana tany amin'ireo tompona ‘domaine’ ny Vondron'ny Mpanao Gazety Tatsinanana, milaza fa nanala baraka ireo mpampiantrano vohikala mpanome tolotra aterineto (ISP). Nanenjika mpandraharahana vohikala teo amin'ny roa ambinifolo teo ihany koa izy ireo noho ny fanalàm-baraka, indreto misy vitsivitsy tamin'izy ireo:
Ny vohikala Wikipedia Sinoa izay an'ny Fikambanana Wikimedia
Ny “Encyclopedia” momba ireo vondrom-piarahamonina virtoaly ao Hong Kong izay an'ny Wikia Inc.
Sehatra fiadian-kevitra Golden, Hong Kong an'ny Fevaworks Solutions Limited
inmediahk.net an'ny inmediahk.net Limited
Ny lalàna mikasika ny fanalàm-baraka any Hong Kong
Any Hong Kong, trngam-pitsarana sivily ny fanalam-baraka, izay midika fa vantany vao manam-bola hanaramàna mpisolo vava ny olona iray , afaka manenjika ara-pitsarana ireo olona, na iza na iza, manao tsikera momba azy ireo. Ny mpitory dia manana ny adidy hanaporofo fa tena nisy ny zavatra notenenin'izy ireo mba hiarovany tsara ny tenany. Na eo aza izany, any amin'ny seha-pitsarana hafa, tahaka ny any Etazonia, ny mpisolovava dia tsy maintsy manome porofo manamarina fa tsy nentanin'ny endrikendrika fotsiny ny tsikeran'ny mpitory.
Ireo “lahatsoratra manala baraka” enjehan'ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana dia matetika momba ny resaka fanelezana rongony ataon'ny mpanangana azy – Ma Sik Chun sy Ma Sik Yu. Nenjehin'ny Governemantan'i Hong Kong izy mirahalahy ireo tamin'ny 1977 nefa tsy nefainy ny onitra ary lasa nitsoaka tany Taiwan ny 1978. Voatatitra tanteraka tao anatin'ireo gazety tany an-toerana izany raharaha izany ny taona 70 [jereo ny jpg].
Mba hanakànana ireo vohikala sy mpampiasa aterineto tsy hiresaka ilay tantara ratsy, manomboka mitory ireo vohikala any an-toerana sy any ivelany ary ireo ISP ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana.
Fitoriana ny Wikimedia Foundation
Amin'ny tranga mikasika ny Wikipedia Sinoa, ny Wikimedia Foundation, amin'ny maha fikambanana any ivelany azy, dia tsy niraharaha ny fiantsoan'ny fitsarana ary tsy tonga tamin'ny fotoam-pitsarana. Vokatr'izay dia nahazo taratasim-pitsarana manomerariny azy ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana, anisan'izany ny filazana ny fisiam-pahavoazana sy ny didy navoaka ny Aogositra 2010. Mazava ho azy fa ny didim-pitsaran'i Hong Kong dia tsy afaka ho tontosaina anatina seha-pitsaràna hafa, amin'ny raharaha mikasika ny Wikimedia Foundation, any Kalifornia.
Ho an'ireo orinasa voafehin'ny lalàna any ivelany, azo atao hoe mora ny fiadiana amina antsonjay araka ny lalàna tahaka izao. Hatramin'izao, ireo antsoina hoe lahatsoratra fanalàm-baraka dia mbola tsy nofafàna tao amin'ny vohikalan'ny Wikipedia Sinoa sy ny Wikia.com. Na eo aza izany, ho an'ny orinasa voasoratra any Hong Kong, indrindra ireo manana loharanom-bola marefo dia marefo, dia tena mampatahotra io.
Ny trangan'ny Sehatra fiadian-kevitra Golden ao Hong Kong
Fevaworks, ny mpandraharaha ny Sehatra fiadin-kevitra Golden dia nandany lelavola mitentina eo amin'ny antsasaka tapitrisa dollars Hong Kong eo ho eo mba hiarovany ny tenan'izy ireo manoloana ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana.
Koa satria sarotra ihany ho an'ireo vahoaka tsotra ny hanome porofo fa tena nanao marina tokoa ny heloka fandraharahana rongony i Ma Sik Chun sy Ma Sik Yu have sy hitady vola hahitana fa ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana (satria tsy nanefa ny onitra izy ireo ary tsy voataritarika teny amin'ny fitsarana halaina ambavany), niaro ny raharaha nahakasika ny Sehatra Fiadian-kevitra Golden ho “fanelezana tsy manan-tsiny” ny mpisolo vava . Tamin'ny farany, nanome rariny ny Fevaworks tamin'ny roa tamin'ireo fiampangana ary nandray ilay mpandraharaha ho tompon'andraikitra tamin'ny niandrasan'izy ireo valo volana vao namafa ireo hafatra. Tsy maintsy nandoa onitra mitentina HKD100,000 tamin'ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana ilay mpandraharaha.
Na eo aza izany, manohy manenjika ilay mpandraharaha hatrany ny vohikalan'ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana noho ny fanalàm-baraka 22 hafa ary mangataka amin'ilay mpandraharaha hanakatona ny mailaka sy ny I.P-n'ireo mpampiasa aterineto voakasik'izany. Ny hetsika tahaka izany, raha lavorary, dia mety hanimba ny fikambanamben'ny aterineto ao anatin'ny Sehatra Fiadian-kevitra Golden izay tena manakiana mafy ny governementa ary mahavatra amin'ny famokarana hadrohadro fanakianana ara-politika manohitra ny governemanta ao Hong Kong sy ny ankolafy mpanao politika mpomba an'i Shina.
Ny trangan'ny inmediahk.net
Amin'ny tsy maha ao anatin'ny vohikalan'ny media sosialy mpikatsaka tombontsoa azy, ny mpandraharaha ao amin'ny nmediahk.net, inmediahk Limited (orinasa voarakitra ao an-toerana), tsy afaka na dia ny hisahana ny fanaramàna mpisolovava hisolo tena ny fikambanana eny amin'ny fitsarana fotsiny aza. Amin'izao fotoana dia mizotra tsy misy mpisolovava io raharaha io. Mba hiarovana ny vohikala amin'ny fanararaotana mihoam-pefy amin'ny lalàna , nomen'ny tompon'ity vohikala ity mpandraharaha any ivelany, inmediahk LLC (misoratra any Nevada) ny fitantanana ny vohikala tamin'ny voalohandohan'ny volana May 2011. Na eo aza izany, herinandro lasa izay, ny ISP (RackSpace) avy any Etazonia izay mpampiantrano ny vohikala ihany koa dia nahazo antontan-taratasim-pitsarana vitsivitsy avy amin'ny Vondrona Mpanao Gazety Tatsinanana ary nampiato ny vohikala teo amin'ny 12 ora teo ho eo [Ilay mpandraharaha, inmediahk LLC, tsy maintsy nizaka ny ampahan'ny andraikitra satria tsy namaky ny mailaka maika nalefan'ny RackSpace]. Soa ihany, manoloana ny fanazavana vitsivitsy, namerina nanokatra ny vohikala teo noho eo ny Rackspace.
Ny zava-kendrena amin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity dia ny hanazavana ny zava-misy amin'izao fotoana any Hong Kong ary araka izany dia manentana ireo ISP any ivelany na ireo vohikala mpampiantrano bilaogy mba tsy hatahotra ireo antontan-taratasim-pitsarana nalefan'ny Vondrona Mpanao gazety Tatsinanana. Sangy ratsy ara-pitsarana ity kanefa dia nahatonga fahanginana amin'ny tontolon'ny aterineto any an-toerana.